एक्सेलमा ड्यासबोर्डहरू, त्रुटिहरूको जोखिमविना सिक्दै।
द्वारा पोस्ट गरिएको Tranquillus | मई 23, 2020 | कार्यालय
एक्सेलमा ड्यासबोर्डहरू एक विशाल विषय हो। म एक शुरुआती हुँ, के म ड्यासबोर्ड सिर्जना गरेर साँच्चिकै सुरू गर्न सक्छु? मलाई कती समय लाग्नेछ? एकीकृत गर्न अनुगमन सूचकहरू के हुन्? व्यावहारिक भिडियो उदाहरणमा आधारित। र एक टन सूत्रहरू सम्झना बिना। वा पनि VBA भाषामा १० घण्टाको प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सुरू गर्नुहोस्। तपाईंसँग सजिलैसँग प्रभावशाली ड्यासबोर्ड हुन सक्छ तीनदेखि चार घण्टामा। यो सबै ग्राफिक गुणवत्तामा निर्भर गर्दछ जुन तपाईं आफ्नो टेबलमा दिन चाहानुहुन्छ। यदि तपाइँ यो प्रिन्ट गर्न योजना गर्नुहुन्छ भने यसलाई तपाइँका सहकर्मीहरूलाई वितरण गर्नुहोस्। केही पक्षहरूमा ध्यान दिन र १ 10 घण्टा गणना गर्न उत्तम हुन्छ। र हो! शैतान विवरण मा छ।
एक विशिष्ट आवश्यकताको लागि ड्यासबोर्डहरू
तपाईं प्राविधिक भाग मा प्रवेश गर्नु अघि। पहिले तपाईले यो सुनिश्चित गर्नु पर्छ कि तपाईको ड्यासबोर्डले वास्तविक आवश्यकता पूरा गर्दछ। तपाईका साथीहरुलाई कल्पना गर्नुहोस् बैठक कोठामा। तपाईं विशाल स्क्रिनमा तपाईंको नयाँ ड्यासबोर्ड प्रोजेक्ट गर्नुहुन्छ। र यसले वास्तवमा तपाइँलाई दुई महिना लाग्यो। एकमा रोकेटको ककपिटमा रहेको प्रभाव छ। वा बरु ग्यास कारखानाको संकट कोठामा। कसैले यसलाई बुझ्दैनन्। तर हामी उदाहरणका लागि देख्दछौं कि पार्किंगमा पार्क गरिएको कारको संख्या समावेश छ। कुन मूल्य वर्धित जानकारी समावेश गर्नुपर्दछ भनेर निर्धारण गर्न यो वास्तवमै महत्वपूर्ण छ। आफ्नो समय खेर फाल नगर्नुहोस्। र तपाइँका सहकर्मीहरूलाई पूर्ण बेकार ट्र्याकि tools उपकरणहरूसँग दिक्क लाग्नबाट बच्नुहोस्।
अक्सर देखीएको अनुगमन सूचकहरूका उदाहरणहरू
पक्कै पनि प्रत्येक ड्यासबोर्ड एक विशेष परिस्थितिको अनुरूप हुनुपर्दछ। तर फराकिलो रेखाहरु कोर्न सकिन्छ। हामी सामान्य रूपमा सूचीको ग्राफिक सिंहावलोकन पाउन चाहन्छौं। ड्यासबोर्डले तपाईंलाई धेरै प्रश्नहरूको चाँडो जवाफ दिन मद्दत गर्दछ।
के बिक्री लक्ष्यहरू, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, प्राप्त छन्?
हाम्रो शेयर को स्तर के हो? उत्पाद द्वारा ब्रेकडाउन, सन्दर्भ द्वारा।
प्रसंस्करण विवादहरूको लागि समय सीमा के हो, ग्राहक समस्याहरूको समाधानको दर के हो?
जब हामी गतिविधि मा एक चरम सामना गर्नेछौं? टोलीहरुलाई सुदृढ पार्न कति जना मानिस चाहिन्छ?
यो वा त्यो परियोजनाको प्रगति कहाँ छ?
तपाईंको डिस्पोजलमा प्रासंगिक ड्यासबोर्डको साथ। एक नजरमा, तपाईंसँग यस प्रकारको प्रश्नहरूको सम्पूर्ण श्रृंखलाहरूको उत्तर हुन सक्छ।
के मेरो ड्यासबोर्डहरूमा कुनै विशेष आकृति हुनुपर्दछ?
होईन, जे भए पनि अभ्यासमा पनि तिनीहरू सबै एक जस्तै देखिन्छन्। तपाईंसँग स्पष्ट रूपमा तपाईंको इच्छाको क्षमता छ। व्यावसायिक वातावरण मा। म तपाईंलाई सल्लाह दिन्छु कि तपाईं जुनसुकै ठाउँमा पनि देख्न सक्नुहुने नजिक रहनुहोस्। दुई, तीन ग्राफ, एक गेज एक मेनू प्रयोगकर्ता को आंकड़ा परिष्कृत गर्न को लागी अनुमति दिदै। र किन सामान्य भन्दा अलि बढी परिष्कृत पृष्ठभूमि छैन। तर अब जानु हुँदैन।
अब अभ्यासमा जानुहोस् र एक्सेलमा ड्यासबोर्ड गुरु बन्नुहोस्
उसको प्रत्येक प्रशिक्षणमा तपाई ड्यासबोर्डको निर्माणमा सहयोग गर्नुहुनेछ। तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको गाईडको पालना गर्नु हो। तपाईंको विशेष गतिविधिसँग सम्बन्धित केही साना संशोधनहरू। र भोईला। पहिलो कठिनाई मा हार नमान्नुहोस्। फेरि सुरु गर्नुहोस् यदि तपाईंले पहिलो पटक चाहेको प्रभाव प्राप्त गर्नुभएन। र तपाईं देख्नुहुनेछ, यो अन्ततः काम गर्दछ। तर आपतकालिनमा यहाँ Q छकेहि निःशुल्क चित्रहरु पहिले नै तयार छ।
रिड तपाईंको मेलबक्सलाई संगीत बाकसको रूपमा सेट गर्नुहोस्
तपाईको परियोजनाको सफलतामा शुभकामना छ ...
एक्सेलमा ड्यासबोर्डहरू, त्रुटिहरूको जोखिमविना सिक्दै। मई 18th, 2020Tranquillus
अघिल्लोमाइक्रोसफ्ट पावरपोइन्ट: यसको उपयोगिता र यसको कार्यक्षमता बुझ्नुहोस्।
निम्नचिनियाँ उपयोगी जान्नुहोस् - अल्ट्रा कुशल र नि: शुल्क विधि
खाता किलर खोज्नुहोस्, विश्वव्यापी प्रयोगकर्ता गाइड जसले तपाईंलाई पुन: प्राप्त खाताहरूको छुटकारा पाउन मद्दत गर्दछ।